ဘုရားကြီး တောင်ဘက်စောင်းတန်း၌ သန့်စင်ခန်းဟောင်းများဖျက်၍ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသန့်စင်ခန်းမ?? - Yangon Media Group
ဘုရားကြီး တောင်ဘက်စောင်းတန်း၌ သန့်စင်ခန်းဟောင်းများဖျက်၍ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသန့်စင်ခန်းမ??
မန္တလေး မြို့၊ မဟာမုနိဘုရားကြီးပရိဝုဏ် အတွင်း တောင်ဘက်စောင်းတန်း အရှေ့ဘက်ရှိ သန့်စင်ခန်းဟောင်း များကို ဖျက်သိမ်း၍ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသန့်စင်ခန်းများဖြင့် အ စားထိုးတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း ကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ရာ လာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်း တွင် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရား ကြီးဂေါပကအဖွဲ့မှ သိရသည်။
”သန့်စင်ခန်းတွေလုံလောက် မှုမရှိတဲ့အတွက် ထပ်မံတိုးချဲ့တည် ဆောက်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်တွေလည်း လာရောက်လေ့လာကြတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရနေရာတစ်နေ ရာဖြစ်တာနဲ့အညီ သန့်စင်ခန်း ဟောင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီး နိုင်ငံ တကာအဆင့်မီဖြစ်အောင် ပုံစံ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသလို ခေတ်မီ စနစ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါ တယ်။ မသန်စွမ်းသူတွေအတွက် ဝှီးချဲလ်နဲ့ ဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့ရ တဲ့အခန်းမျိုးတောင် ထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ သန့် စင်ခန်းအသုံးပြုခကို လုံးဝကောက် ခံခြင်းမရှိတော့ဘဲ နှစ်စဉ်ချထား ပေးလာတဲ့တင်ဒါကိုလည်း မနှစ် ကစပြီးတော့ ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာပါ”ဟု ဘုရားကြီးဂေါပကအဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးလင်းက ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက် တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြော ကြားသည်။
ပရိဝုဏ်အတွင်း ရာဟု ထောင့် (အနောက်မြောက်)နှင့် မြောက်ဘက်စောင်းတန်းအရှေ့ ဘက်တို့တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သန့်စင်ခန်းများကို အခမဲ့ဖွင့်လှစ် ပေးထားပြီးဖြစ်ရာ ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး စီချထားပေးပြီး နေ့စဉ်နံနက် ၄ နာရီခွဲမှ ည ၉ နာရီအထိ သန့် ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ် ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ စည်း ကမ်းတကျ အသုံးပြုပုံနည်းများ ကို သန့်စင်ခန်းများအတွင်း ချိတ် ဆွဲအသိပေးထားပြီး ကျား၊ မ သံ ဃာတော်၊ သီလရှင်သီးသန့်ခန်း များ စီစဉ်ပေးထားကာ ဝန်ထမ်း များဆီမှအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း ခံရပါက ဂေါပကအဖွဲ့ရုံးကိုလာ ရောက်တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းသန့်စင်ခန်းများကို Mother Trading and Construction Group မှ လှူဒါန်းထားခြင်းဖြစ် ပြီး ဗိသုကာပညာရှင်ဦးဆန်းဦးက ပုံစံထုတ်ရေးဆွဲပေးထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဘုရားကြီးဂေါပကအဖွဲ့ မှ သိရသည်။
ပုဂံဒေသ လူနေရပ်များတွင် 'စည်ပင်ဥပဒေ'၊ ရှေးဟောင်းဇုန်များတွင် 'ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာ?